Shiinaha 100% Suuf Gacmo Gaaban Gaaban T-Shirt PY-ND004 Soo-saar iyo Warshad | Pinyang
Naqshad calaamadeysan oo astaan ​​ah T-shaati qoorta wareega oo maran
Sharaxaadda alaabta: Aqoonta dharka funaanad, intee in leeg ayaad taqaan?
1. Waa maxay miisaanka gram?
Culeyska gram waxaa guud ahaan loo isticmaalaa in lagu muujiyo dhumucda dharka. Miisaanka weyn, dharka ayaa ka sii dhumuc weyn. Miisaanka funaanaddu guud ahaan waa inta u dhexeysa 160g iyo 220g. Haddii ay aad u dhuuban tahay, waxay noqon doontaa mid aad u hufan. Hadday aad u dhumuc weyn tahay, waxay noqon doontaa sultry. Guud ahaan, waxaa fiican in la kala doorto inta u dhexeysa 180-260g. (gacmo gaab badanaa waa 180-220g, taas oo ah uun dhumucda saxda ah ee la xidho. T-shaati gacmo dheere guud ahaan waxay doortaan 260g maro, oo ka tirsan nooca dhumucdiisa)
2. Waa maxay nambarka laantu?
Qeexid: dhererka deyrka dunta suufka oo leh miisaan guud oo ah hal rodol.
Weelka Qarxa Weyn: dun suuf saafiya oo leh 18 ama wax ka yar, inta badan waxaa loo isticmaalaa tolidda dharka qaro weyn iyo kuwa culus ama kor u qaadista iyo wareejinta dharka suufka ah.
Maro dhexdhexaad ah oo tirinta ah: 19-29 tiriyo dunta cudbiga ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa dharka dhejiska leh shuruudaha guud.
Mashiinka tirade wanaagsan: 30-60 tiir dunta suufka ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa dharka sare ee dharka. Markay tiradu sareyso, ayaa ka jilicsan. Funaanadaha badanaa waa 21 iyo 32.
3. Muxuu shanleeyaa?
Maro cudbi ah oo funaanad loo adeegsan karo ayaa loo kala saari karaa dunta shanlayda ah iyo dunta lagu xardhay.
Dun Combed: waxaa loola jeedaa dunta lagu miiqay habka wareejinta miiqashada, oo sidoo kale loo yaqaan dun aan caadi ahayn.
Mashiinka Combed: waxaa loola jeedaa dunta ay soo saartay iyadoo lagu darayo habka shanleynta ee dunta shanlaysa ee caadiga ah marka lagu miiqinayo fiber suuf tayo sare leh sida alaabta ceeriin. Dusha sare ee dharku waa mid nadiif ah oo jilicsan.
4. Waa maxay nidaamka daabacaadda funaanad?
Daabacaadda funaanad waxaa asal ahaan loo qaybiyaa daabacaadda shaashadda iyo daabacaadda wareejinta.
Daabacaadda shaashadda: tiknoolajiyaddu way adag tahay, inta badanna waxaa ku jira naqshadeynta, filimka, daabacaadda, dhowr tallaabo oo la qalajiyo. Faa'iidooyinka daabacaadda shaashadda ayaa ah dheereynta midabka sare, adkeysiga iyo deggenaanta. Sababtoo ah qiimaha samaynta saxanka sare ee daabacaadda shaashadda, wax soo saar ballaaran ayaa loo baahan yahay si loo yareeyo kharashka, kaas oo aan buuxin karin shuruudaha daabacaadda hal ama yar.
Daabacaadda wareejinta: sidoo kale loo yaqaan shaabad kulul. Faa'iidooyinka waa midab dhalaalaya iyo farsamo fudud. Faa’iido darrada ayaa ah in cimri dhererka qaabku uu liito, oo aan u adkeysanin xirashada iyo dhaqidda.
5. Sidee funaanad loogu heesayaa?
Astaamaha daaweynta heesaha ayaa ah in laga saaro fuzz-ka lagu sameeyay dusha sare ee dunta sababo la xiriira fowdada aan duudduubnayn iyo fiber-ka soo baxa, si ay maradu u ahaato mid jilicsan oo qurux badan, midabka dharkuna yahay mid siman, oo daabacan kara qaabab cad oo wanaagsan.
6. Maxay yihiin faa'iidooyinka dharka cudbiga ah ee cudbiga ah? Waa maxay sababta loogu daro spandex?
Dharka cudbiga ah ee saafiga ah waxaa lagu gartaa maareyn wanaagsan, raaxo leh iyo ilaalin bey'adeed, laakiin way fududahay laalaabku. Ku darista qadar yar oo ah spandex waxay si weyn u hagaajin kartaa sifooyinka jireed ee dharka, waxay si weyn u kordhin kartaa dabacsanaanta dharka, iyadoo la ilaalinayo qaabka iyo raaxada suufka saafiga ah. Intaa waxaa sii dheer, ku darista spandex ee qoorta waxay ka hortagi kartaa qoorta inuu furo iyo inuu xumaado, oo uu ilaaliyo dabacsanaanta joogtada ah ee qoorta.
T-shaati gacmo-gaaban oo wareegsan oo faaruq ah, suuf aad u fiican, jilicsan, saafi ah oo dabiici ah, ma laha walxo waxyeello leh, ammaan ah oo deggan. Naqshadeynta qoorta shaqaalaha ee caadiga ah, oo raaxo leh oo jilicsan, ka tamar badan. Kabaha fudud ee moodada ah, farsamada wanaagsan, dhaqdhaqaaqa bilaashka ah. Tiknoolajiyada gawaarida, cufnaanta ayaa soo hagaageysa, taam raaxo leh. Nidaamka daabacaadda ee kala duwan, dharka shaqada ee sida gaarka ah loo sameeyo, dharka xafladda, dharka fasalka, dharka waxqabadka, dharka kooxda, dharka waalidka-ilmaha, iwm.
Farsamada: Hababka Daabacaadda Daabacan: Daabacaadda dhijitaalka ah
Goobta Asalka: Jiangxi, Magaca Magaca Shiinaha: PIN YANG YU
Number Model: PY-WW003 Feature: La-duudduubashada, Neefsashada, Isugeynta Cabbirka, Waara
Koolar: Miisaanka O-Neck Miisaanka: 180 Grams
Tirada La Heli Karo: 4480 Waxyaabaha: 100% cudbi
Qaabka Gacanta: Naqshadeynta Gaaban Gaaban: Meel bannaan, Meel Lagu Soo Dhaweeyay
Nooca Qaabka: Nooca Daabac: Casriga Casriga ah
Nooca Dharka: Muddo 7 maalmood ah oo ka sii darran tusaalaha amarka hoggaaminta waqtiga: Taageero
Cabbirka: Astaamaha Astaamaysan ee Khariidadda: Aqbal Astaanta Gaarka ah
Sleeve: Qalabka Leeve Gaaban: 1pc / Opp Bag
Magaca badeecada: funaanadaha mantiga Xilliga: Xirashada Xagaaga
Dhar: 100% cudbi ah
A1: Waxaan nahay soo saare ku yaal gobolka JiangXi, waxaanan leenahay shirkadda 500㎡ ee Guangzhou, Shiinaha.
Q2: Ma hayno naqshadeynta qorraxda hadda, ma sameyn karnaa qulqulka?
J2: Haa waa hubaal, fadlan noo sheeg fikraddaada ku saabsan cirifyada, naqshadeeyeheenna ayaa kaa caawin doona dhammaystirka nashqadda.
Q3: Waa maxay waqtiga dhalmadaadu?
A3: Muunad guud ahaan 3-7days ka dib bixinta ， Nidaamka loo habeeyay, Waxay kuxirantahay alaabada & tirada.
Q4: Miyaan ku dhex qasan karaa naqshado kala duwan?
J4: Waa hubaal!
Q5: Waa maxay siyaasaddaada tusaalaha ah?
A5: Tijaabooyinka la habeeyay, waxaan ka qaadi doonnaa khidmadda muunadda laakiin waan soo celin doonnaa markii ay dalbadaan in ka badan 100 nooc
S6: Ma heli karaa qiimo hoose haddii aan dalbado tiro badan?
A6: Haa, qiimayaasha jaban oo leh amarro tiro badan.
Q7: Sideed u dammaanad qaadi kartaa tayada wax soo saarka?
J7: Waxaan si adag u hubinay ka hor inta aan la dirin, markale ayaan soo saari doonaa bilaash hadii ay tahay dhibaato dhankayaga ah
S8: Ma heli karaa wax walba oo halkan lagu habeeyay?
J8: Dhab ahaantii haa; kaliya si naxariis leh noogu soo sheeg dalabaadkaaga gaarka ah, waanu qaban doonaa shaqada.
Hore: Wareegga Qoorta Daabac Ragga Gacmo Dheer T-Shirt PY-NC003
Xiga: Casaan Wareegga-Wareegga Gawaarida Gaaban Rag T-Shirt PY-ND005
Midabyada Customizable Cotton Xamuul Ragga Jaakada PY -...
Cotton Oo linen Retro V-Neck Long darafta Ragga T ...
Astaanta Calaamadda Gaarka ah ee Ragga T-Shirt PY-NC002
Fashion Trends Zip Hoodies Ragga Jaakada PY-MJ005
Hip-Hop Sawir Gacmeed Gaaban Ragga Gaaban T-Shirt PY-ND002
Suufka Jiinyeer Xagaaga Ragga Isboortiga PY-NK002